Maxay ka dhigan tahay booqashada Obama ee Cuba? - BBC Somali
Maxay ka dhigan tahay booqashada Obama ee Cuba?
Madaxweyne Obama oo ay u gashay maalintiisii labaad ee booqashada taariikhiga ah ee uu ku joogo jaziiradda shuuciga ah ee Cuba, ayaa isaga iyo dhigiisa marti galiyay waxa ay bilaabayaan in ay ka wadahadlaan arrimaha xasaasiga ah.
Obama, ayaa ballan qaaday in uu Madaxweyne Raul Castro, lasoo qaadi doono su'aalaha ay ka midka yihiin xoriyatul qowlka iyo in dadku ay si xor ah shirar u qabsan karaan, saraakiisha ayaa sheegaya in ajandaha uu sidoo kale ka mid noqon doono dib u habeyn lagu sameeyo dhaqaalaha.
Cuba ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay wadaxaajood, hasayeeshee aanay wax gorgortan ah ka geli doonin in wax laga badelo hannaanka halka xisbi ee uu dalkaasi leeyahay.
Haddaba xiriirka u dhaxeeya labada waddan iyo marxaladihii uu soo maray iyo heerka uu maanta taagan yahay ayaan ka waraysannay Dr. Axmed Cali Axmed oo u warramay Cabdifitaax Ibraahim Cagayare, oo marka hore weydiiyey bal inuu ka warramo taariikhda xiriirka labada waddan.